တရုတ်နိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်အားလုံးတွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်- နှစ်ကုန်ပိုင်း၌ ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးစင်တာများ လွှမ်းခြုံနိုင်မည် - Xinhua News Agency
ပေကျင်း ၊ ဇွန် ၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီ သတင်းဌာနက ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပုံမှန် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၌ ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးစင်တာ တည်ဆောက်သည့် အတိုင်းအတာကို ပိုမိုတိုးချဲ့သွားမည်ဖြစ်ပြီး အနောက်အလယ်ပိုင်းဒေရှိ ဆေးဝါးကုသမှုအရင်းအမြစ် မလုံလောက်မှုရှိသည့် ပြည်နယ်များကို ထည့်သွင်းစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းအချိန်တွင် ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးစင်တာ တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်နယ်အားလုံးကို လွှမ်းခြုံနိုမည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကော်မတီ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန တာဝန်ခံ ဆွန်းကျစ်ချိန် က ဇွန်လ ၇ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ဆွန်းကျစ်ချိန်က ပထမအသုတ် ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးစင်တာ စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည့် ပြည်နယ်များမှာ ဟဲပေ ၊ လျောင်နင် ၊ ဆန်းရှီး ၊ ဖူကျန့် ၊ အန်းဟွေး နှင့် ယူနန် စသည့် ပြည်နယ် ၈ ခုဖြစ်ပြီး စီမံကိန်း ၁၀ ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကာ ၎င်းတို့အားလုံးမှာ လက်ရှိချိန်တွင် အသီးသီး စတင်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ရှင်းကျန်း Kashgar ဒေသ ရှိ နန်ကျန်း ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးစင်တာ တည်ဆောက်မှုစီမံကိန်း အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်၌ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စတင်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ထို့ပြင် ဆွန်းကျစ်ချိန် က စောင့်ကြည့်တိုင်းတာမှု စာရင်းပြုစုချက်များအရ စမ်းသပ်မှုဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စီမံကိန်းများက ဒေသတွင်း နှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်သော လူနားများအတွက် သိသာစွာ ထိရောက်မှုရှိစေခဲ့ကြောင်း ၊ ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးစင်တာ တည်ဆောက်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် ကနဦးအနေဖြင့် ဆေးဝါးကုသမှုသွားရောက်သည့် နေရာကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ၊ ကျန်းမာရေးစင်တာ၏ သက်ရောက်မှုကို တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့ပြီး လူတော်လူကောင်းအဖွဲ့များတည်ဆောက်ခြင်းကို ပိုမိုလျင်မြန်လာစေခဲ့ကာ ဒေသန္တရ ဆေးဝါးကုသမှု အဆင့်အတန်းကိုလည်း အချိန်တိုအတွင်း သိသာစွာ မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ရှင်းကျန်း Kashgar ဒေသ ရှိ နန်ကျန်း ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးစင်တာ တည်ဆောက်မှုစီမံကိန်း စတင်ခြင်းအခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်၌ ကျင်းပပြုလုပ်နေစဉ်(ဒရုန်းဓာတ်ပုံ) (ဆင်ဟွာ)
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှု စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးစင်တာ တည်ဆောက်မှုဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုလည်ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ၊ ပထမအသုတ် စမ်းသပ်မှု စီမံကိန်း ၁၀ ခုတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၃,၆၀၀ ဦးကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း ၊ ၎င်းတို့အနက် အသစ်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် လူဦးရေမှာ ၆,၃၀၀ ဦးဖြစ်ကြောင်း ၊ ဆေးဝါးကုသမှု ကုတင်ပေါင်း ၁၅,၂၀၀ ကို စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် ကုတင်ပေါင်း ၆,၅၀၀ မှ အသစ်တိုးချဲ့လိုက်ခြင်းဖြစ်ကာ ပျှမ်းမျှအားဖြင့် ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးစင်တာ တစ်ခုစီတိုင်းတွင် ဆေးဝါးကုသမှု ကုတင်ပေါင်း ၁,၅၀၀ ကို ပိုင်ဆိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ရှင်းကျန်း Kashgar ဒေသ ရှိ နန်ကျန်း ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးစင်တာ တည်ဆောက်မှုစီမံကိန်း စတင်ခြင်းအခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်၌ ကျင်းပပြုလုပ်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
မိတ်ဆက်ပြောကြားချက်အရ ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးစင်တာ တည်ဆောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ထိပ်တန်း အရည်အသွေးမြင့် ကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်ပြည့်ဝသည့် ဒေသများမှ နိုင်ငံတော်အဆင့် အဆင့်အတန်း မြင့်မားသည့် ဆေးရုံများကို ရွေးချယ်ကာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကို ပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ အရည်အသွေးမြင့် ကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်များ လွန်စွာချို့တဲ့ပြီး လူဦးရေများပြားသည့် အခြေခံအားနည်းသော ပြည်နယ်များတွင် ဆေးရုံခွဲများ သို့မဟုတ် စင်တာခွဲ စသည့် အဖွဲ့အစည်းများ သွားရောက်တည်ဆောက်စေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ (Xinhua)
1. 11月18日，南疆区域医疗中心建设项目开工仪式在新疆喀什地区疏附县吾库萨克镇举行（无人机照片）。新华社记者 胡虎虎 摄
2. 11月18日，南疆区域医疗中心建设项目在新疆喀什地区疏附县吾库萨克镇开工。新华社记者 胡虎虎 摄
3. 11月18日，南疆区域医疗中心建设项目开工仪式在新疆喀什地区疏附县吾库萨克镇举行（无人机照片）。新华社记者 胡虎虎 摄
4. 11月18日，南疆区域医疗中心建设项目开工仪式在新疆喀什地区疏附县吾库萨克镇举行。新华社记者 胡虎虎 摄